Heniheny bilidaozera TYS165-3 - China Xuanhua Construction milina
TYS165-3 bilidaozera dia 165 horsepower lalana-karazana hydraulic mivantana dozer amin'ny fiara, semi-henjana mihantona sy hydraulic manampy miasa, mpanamory hydraulic vary fanaraha-maso sy ny tokan-tena no mamily sehatra fanaraha-maso sy ny braking. TYS165-3 bilidaozera dia miavaka amin'ny avo mahomby, misokatra fijery, optimisé rafitra, mora fandidiana sy ny asa fanompoana amin'ny vidiny ambany kalitao sy azo antoka manontolo. Izy io dia ny fanavaozana vokatra miorina amin'ny TYS165-2 bilidaozera. Specifications Dozer ...
TYS165-3 bilidaozera dia 165 horsepower lalana-karazana hydraulic mivantana dozer amin'ny fiara, semi-henjana mihantona sy hydraulic manampy miasa, mpanamory hydraulic vary fanaraha-maso sy ny tokan-tena no mamily sehatra fanaraha-maso sy ny braking.
TYS165-3 bilidaozera dia miavaka amin'ny avo mahomby, misokatra fijery, optimisé rafitra, mora fandidiana sy ny asa fanompoana amin'ny vidiny ambany kalitao sy azo antoka manontolo. Izy io dia ny fanavaozana vokatra miorina amin'ny TYS165-2 bilidaozera.
(tsy ao anatin'izany ny Ripper) Operation lanja ( Kg) 18300
Ground tsindry (K Pa ) 28.2
Min. tany fangatahany fahazoan-dalana (MG) 375
Dozing fahafahana ( m ³) 4.5
Lafiny ankapobeny ( MG ) 5585× 4222× 3 190
W idth ny kiraro (MG) 1000
Forward (Km / h) 0-3.59 0-6.76 0-12.37
Mihemotra (Km / h) 0-4.33 0-8.90 0-14.96
Output System ( L / min ) 190
Previous: Heniheny bilidaozera SD7LGP
Next: Coaling bilidaozera SD7
220hp 24ton honahona bilidaozera
bilidaozera / honahona bilidaozera / honahona Dozer
Sd16l honahona bilidaozera
Sd6glgp bilidaozera heniheny
Shantui Sd16 honahona bilidaozera
Shantui honahona bilidaozera
honahona bilidaozera 220hp
heniheny bilidaozera Fa Fanorenana
honahona bilidaozera For Sale
honahona bilidaozera Sd16l
honahona bilidaozera / honahona Dozer
honahona Crawler bilidaozera
Nampiasa Cat honahona bilidaozera
nampiasaina D6d bilidaozera honahona
faritra mando honahona bilidaozera
Normal FIRAFITRA T140-1